उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले अहिले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक नेपाली जनताले नागरिकता पाएनन् भन्ने चिन्ताले नभएर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन, विशेष गरी भारतीयहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्नु भयो । केसीले आफू सरकारमा रहेका बेला जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरेको स्मरण गर्दै सीमा अतिक्रमणले मात्र नभएर भारतले जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई पनि अगाडि बढाइरहेको बताउनु भयो । “अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयक विदेशीलाई, खासगरी भारतलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो” केसीको थप जोड थियो– “सत्तामा जाने पार्टीहरूलाई विदेशीलाई रिझाएर मात्र सरकारमा बस्न पाइन्छ भन्ने गलत सोचाइ छ ।” केसीको कथन थियो– “अङ्गीकृत नागरिकहरू सांसद, मन्त्री भइसके । उनीहरू प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, प्रधान सेनापति बन्न चाहान्छन् । त्यसैले यस प्रकारको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक आइरहेको छ ।” केसीले अगाडि भन्नु भयो– “पुस्तौँपुस्तादेखि तराई–मधेशमा बस्दै आएका दलित, गरिब, भूमिहीन जनताले नागरिकता पाएका छैनन् । तर यहाँका शासकहरूलाई बाहिरबाट आएकाहरूको बारेमा चिन्ता छ ।” केसीले भन्नु भयो– “अङ्गीकृतबाट जन्मेकाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन थालिएको छ । हामीले देश बचाउनका लागि नेताहरूको मुख हेरेर हुँदैन । हामी आफै अगाडि सरेर देश बचाउनु पर्दछ ।”
कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु देशको हितमा नभएको बताउनु भयो । नागरिकता जस्तो राष्ट्रियता र सुरक्षासित जोडिएको गम्भीर विषयलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय बताउन नहुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । प्रवक्ता पुरीले यो नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुने हो भने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्दै जाने खतरा औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माले) का महासचिव सी.पी. मैनाली, नेकपा (नेकपा) का नेताहरू बाचस्पति देवकोटा र जगन्नाथ खतिवडा, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका साध्य बहादुर भण्डारी, पुष्पलाल अध्ययन समाजका लोककृष्ण भट्टराई, नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की, जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्ले लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । वक्ताहरूले कृते र नक्कली नागरिकताको छानबिन गरी खारेज गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन माग राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता नेकपा मालेका कृष्ण राना र सञ्चालन राजमोका लक्ष्मणदेव पाण्डेले गर्नु भएको थियो ।
यस अघि चैत्र १३ गते आयोजकहरूले संसद सचिवालयमा सांसदहरूको नाममा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । तत्पश्चात् राजधानीको हनुमानस्थानमा कोणसभा सम्पन्न भएको थियो । हस्ताक्षर अभियान समेत सँगै चलाइएको उक्त कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी, राजमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेल, नेकपा (माले) का केन्द्रीय सदस्य केदार गिरी, जनसमाजवादी पार्टीका सुभाषराज काफ्ले लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन राजमो काठमाडौँका सचिव जगत रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
चैत्र १४ गते भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम कोणसभा सहित सम्पन्न भएको थियो । नेकपा (माले) का भक्तपुर जिल्ला सचिव दिनेश खातीको अध्यक्षतामा अगाडि बढेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन राजमो भक्तपुरका अध्यक्ष शिवहरि खनालले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी, नेकपा (माले) का स्थायी समिति सदस्य कुमार बेलबासे, राजमो केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर थापा, राष्ट्रिय जागरण परिषदका साध्य बहादुर भण्डारी, जनसमाजवादी पार्टीका सुभाषराज काफ्ले, विज्ञ मदन ढुङ्गेल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । सो अवसर सार्वजनिक सुनुवाइ अन्तर्गत जनसाधारणले सोधेका प्रश्नहरूको आयोजकद्वारा उत्तर दिइएको थियो ।
चैत्र १७ गते ललितपुरको लगनखेलमा हस्ताक्षर र सार्वजनिक सुनुवाइ सहितको कोणसभा सम्पन्न भएको छ । लगतखेल बसपार्कमा सम्पन्न उक्त कोणसभामा नेकपा (माले) का महासचिव सी.पी. मैनाली, राजमो केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर थापा, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली, राष्ट्रिय जागरण परिषदका साध्य बहादुर भण्डारी, अधिवक्ता दीर्घलाल गिरी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । राजमो ललितपुरका अध्यक्ष निलगोविन्द महर्जनको अध्यक्षता तथा नेकपा (माले) का केन्द्रीय सदस्य केदार गिरीको सञ्चालनमा अगाडि बढेको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण परिषदका सूर्य रेग्मीले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
बागलुङमा चैत्र १८ गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध नागरिक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ । जिल्लामा क्रियाशील नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (माले) लगायतका दलहरूले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । हस्ताक्षर अभियानको सुरुवात गर्दै राजमो बागलुङका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले यो वा त्यो ढङ्गले विदेशीलाई नागरिकता दिदा नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने देखिएकाले त्यसका विरुद्ध नागरिक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको बताउनु भयो । नेकपा (माले) का नेता मञ्जु क्षेत्रीले राष्ट्रको हित विपरीत हुने कार्यको सदैव खवरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । राजमो बागलुङका सचिव भिमलाल पोख्रेलले चैत २७ गतेसम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने जानकारी दिनु भयो ।
प्युठानमा चैत्र २४ र २५ गते जिल्लाको भिङ्ग्री, बागदुला, खलङ्गा र मच्छीबाट हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । राजमो नेता बोम बहादुर खत्रीका अनुसार नेकपा (मसाल), राजमो, नेकपा (माले) लगायतका सङ्गठनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि चैत्र २८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
अर्घाखाँचीमा चैत्र १८ गतेदेखि नागरिकता विधेयक २०७५ तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भएको छ । नेकपा मसाल सहित ६ वटा पार्टी तथा अन्य विभिन्न संस्थाहरूले घोषणा गरेको केन्द्रीय कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्घाखाँचीमा यो अभियान सुरु गरिएको राजमो केन्द्रीय सदस्य झविलाल थापाले जानकारी दिनु भयो । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज बिहान सन्धिखर्कको भक्तिटोल चोकमा सेतो ब्यानरमा कालो मसीको हस्ताक्षर सङ्कलनको सुरु गरेको थियो । राजमोका जिल्ला सचिव बाबुराम सुनारको सञ्चालन र जिल्ला अध्यक्ष थम्मन केसीको सहजीकरणमा विहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म भक्तिटोल र दिउसो १२ बजेदेखि शान्ति बगैचामा व्यानर राखेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको थियो । चैत्र २८ गतेसम्म जारी राखिने हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानको पहिलो दिन झण्डै दुई हजारले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दाङमा चैत्र १७ र १८ गते हस्ताक्षर अभियान सहितको कोणसभा सम्पन्न भएको छ । चैत्र १७ गते घोराहीको तुलसीपुरमा सम्पन्न कार्यक्रममा राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य र नेकपा (माले) का जिल्ला सचिव नेत्रप्रकाश पाण्डेले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रम अखिल (छैठौँ) का जिल्ला सदस्य लक्ष्मण विकको सञ्चालनमा अघि बढेको थियो । चैत्र १८ गते तुलसीपुरको बी.पी. चोकमा कोणसभा सम्पन्न भएको छ । राजमोका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, नेकपा (मसाल) दाङका प्रवक्ता भरत भण्डारी, नेताहरू श्यामलाल पोख्रेल, शुक्रराज भण्डारीले मन्तव्य राख्नु भएको सो कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यार्थी नेता लक्ष्मण विकले गर्नु भएको थियो ।
सुर्खेतमा चैत्र २९देखि २७ गतेसम्म हस्ताक्षर अभियान चल्ने भएको छ । चैत्र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गरिएको सो कार्यक्रममा राजमो नेताहरू रत्नविक्रम प्यासी, कृष्ण रावल, भरत शाही, विद्यार्थी नेता हरि बुढा लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा युवक सङ्घका धर्म दानी, अखिल (छैठौँ) का कोषाध्यक्ष हस्तराज रेग्मी, शिक्षक सङ्घका पूर्ण शाही लगायत नेता÷कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । राजमो सुर्खेतका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद सुवेदीले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा सञ्चालन राजमोका विष्णु प्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो । हस्ताक्षर अभियान २८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने राजमो नेता रत्नविक्रम प्यासीले बताउनु भयो ।
कास्कीमा चैत्र १७ र १८ गते हस्ताक्षर अभियान सहितको कोणसभा सम्पन्न भएको छ । चैत्र १७ गते पृथ्वी नारायण क्याम्पस नजिकै भएको कोणसभामा रामजो नेता शङ्कर बराल, राजमो कास्कीका अध्यक्ष रविमोहन ढकाल र नेकपा (माले) का होमनाथ गिरीले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । सोही दिन चिप्लेढुङ्गामा पनि कोणसभा सम्पन्न भएको थियो । सभामा राजमो कास्कीका अध्यक्ष रविमोहन ढकाल र नेकपा (माले) का होमनाथ गिरीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । चैत्र १८ गते पृथ्वीचोकमा सम्पन्न कोणसभामा राजमो नेताहरू शङ्कर बराल, रविमोहन ढकाल लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
कञ्चनपुरमा चैत्र १४ गते महेन्द्रनगरको मदनचोकमा कोणसभा सम्पन्न भएको छ । लाल बहादुर कुँवरको सञ्चालनमा अघि बढेको सो कार्यक्रममा राजमो नेता लोकेन्द्र लम्साल, अखिल (छैठौँ) का महासचिव महेशराज जोशी, समता समाजका महासचिव गोविन्द विकले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । राजमो नेतृ मञ्जु परियारले कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो ।
डोटीमा चैत्र १७ गते दिपायलको पिपला बजारमा हस्ताक्षर सङ्कलन तथा कोणसभा सम्पन्न भएको छ । राजमो डोटीका हेमविक्रम चन्दको सञ्चालनमा अघि बढेको हो कार्यक्रममा राजमोका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
कैलालीमा चैत्र १९ गते हस्ताक्षर अभियान सहितको कोणसभा सम्पन्न भएको छ । नेकपा (मसाल), राजमो र नेकपा (माले) को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । घोडाघोडी नगरपालिकाको सुख्खडबजारमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राजमोका केन्द्रीय सदस्य नन्दराज भट्ट, नेकपा (माले) का पी.बी.एम. सुरेन्द्र ढकाल र अछाम जिल्ला सचिव दिल बहादुर विष्टले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
चितवनमा चैत्र २४देखि २६ गतेसम्मका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने निर्णय भएको राजमो नेता डम्मर पुरीले हाँकलाई बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेकपा (माले) सितको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम चैत्र २८ गते समापन हुनेछ । सो दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कलित हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइने छ ।
यसैबीच, राजमो केन्द्रीय कार्यालयले देशैभरिका करिब ४७ जिल्लामा हस्ताक्षर अभियान तथा कोणसभा सम्पन्न भएको दावी गरेको छ । राजमोले राजधानीमा चैत्र २४ गते माइतीघर मण्डलामा भण्डाफोर सभा तथा जनमातेमालो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ ।